မပေါင်းရဘူး - FunnyPC
" ပြော ... သဲလေး "
" ကိုကို နဲ့ သဲ ပေါင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး "
" ကောင်းတာပေါ့ (အဲလေ)
ဘာဖြစ်လို့ မပေါင်းရတာလဲ သဲရယ် "
" ကိုကိုက အလုပ်တွေ ကြိုးစားတယ်လေ "
" အင်းလေ ... သဲနဲ့နီးဖို့ ကြိုးစားတာလေ "
" ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း .. ကိုကိုက အလုပ်ကြိုးစား၊ ကြိုးစားတော့ ချမ်းသာ ၊ မိန်းမတွေက သမက် ဖမ်းပီးပေးစား ၊ သဲက အသည်းကွဲ ၊ လေလွင့် ၊ အဲ့မှာတင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ညား ၊ တွေ့လား?? မပေါင်းရပါဘူး ဆို "
" တိန် .... အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး သဲရယ် ...
ကိုကိုက ဘယ်သူ့မှ မယူပါဘူး "
" ဟုတ်တယ်၊ ကိုကိုက မယူဘူး၊ ကိုကို့ မေမေက သဘောမတူ ၊ ကိုကိုကလည်း သဲကိုပဲ ချစ် ၊ အဲ့မှာတင် ကိုကို့ မေမေက နှလုံးရောဂါဖြစ်၊ ကိုကိုက သဲကို လမ်းခွဲရ၊ သဲက ရင်ကွဲနာကျ ၊ ဖေးမပေးတဲ့ ရွှေထူးနဲ့ညား .. ကြည့် ... မညားပါဘူးဆို "
" ငင့်!!! ဟုတ်တယ်ဟ "
" အဲ့လို မဟုတ်ရင် ကိုကိုက အလုပ်လုပ်တာ တော်လို့ ၊ နိုင်ငံခြားကို သွားရ ၊ အဲ့မှာတင် Crush ခွက်ရှ်ကိုတွေ့ ၊ ကြိုက်ပီးညား ၊ သဲကိုဖြတ် .. သဲကစိတ်နာနာနဲ့ အောင်ရဲလင်းနဲ့ ညား "
" ငှယ် .... သူညားတာလည်း မင်းသားတွေ ချည်း "
" ဒါက စကားအဖြစ် ပြောတာပါ၊ တကယ်က ကိုကိုက ပြောင်းလဲသွားမှာ "
" တော်ပါပီသဲရယ် ၊ ကိုကို အလုပ် မလုပ်တော့ဘူး ၊ ကျောင်းဆရာပဲ လုပ်စားတော့မယ် .. နော် " 😁
" သိတယ် သိတယ်၊ ကျောင်းဆရာ လုပ်မယ်၊ ကျောင်းဆရာ ဆိုတော့ နယ်ကိုသွား၊ ကလေးတွေ စာသင်၊ ကလေးတွေ မှာက အမတွေ အဒေါ်တွေရှိ ၊ သူတို့က ကျေးဇူးတွေတင် ၊ သံယောဇဉ်တွေဖြစ်၊ ညား၊ အဲ့ရွာမှာ အခြေချ ၊ သဲကိုမေ့သွား၊ သဲက ဝမ်းနည်း ပက်လက်နဲ့ X-Box နဲ့ ညား "
" ငင်!! အာ့လည်း မရဘူးဟ "
" တော်ပြီ သဲရယ်၊ ဆိုက်ကားပဲ နင်းစားတော့မယ် "
" နင်းလေ၊ နင်းပေါ့၊ ကိုကိုက ဆိုက်ကားနင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကားက ဝင်တိုက် ၊ ကားမောင်းလာတာက ကိုကို ငယ်ရည်းစား ၊ ပြန်တွေ့ကျ ၊ ဟိုကောင်မက ဂရုဏာသက်ပြီး ချစ်၊ ကိုကိုကလည်း ပြန်ချစ်၊ အဲ့မှာညား၊ သဲက စိတ်ဆင်းရဲပြီး ကိုရီးယားကိုသွား ဂူဂျွန်ဖြိုးနဲ့ညား "
" တော်လိုက်တော့ ... မင့်ဟာက ငါကချည်း ဖောက်ပြန် မင်းကတော့ အဖြူ သက်သက်လို ပုံစံတွေ ပြောနေတာ "
" အော် .... ငါ့ကို အော်တယ်လား ?? အေးလေ .... အဲ့ဒီမှာ ငါ့ကိုအော် ၊ စိတ်ကုန်တယ် ဆိုပြီး ဘီယာသောက် ၊ KTV သွား ... ဟိုက ကောင်မတွေနဲ့ကြိုက် ... ဘဝပျက်၊ ငါက စိတ်နာပြီး ခရီးသွား ... ဟော .... ထက်ယံ နဲ့ညား "
" ငှယ် .... ငိုပြီ အမေရေ... ငိုပြီဗျ "
" ငိုလေ ... ငို .............. ငိုတော့ ...... #@#$#% "
" ................. ... ...... ညား !!! "
" ..... ............. "
" ကဲကဲ .... တော်တော့ကွာ ... လာ ... အချဉ်သုပ် သွားစားရအောင် "
" နင့်အကြံ ဒါပဲလား ?? ငါ့ကို အချဉ်တွေ ကျွေး၊ ငါက ငါးဖောင်ရိုးဖြစ်လာ "
" သွယ်တယ် လုပ်စမ်းပါ "
" တိတ်စမ်း၊ မသွယ်ဘူး ပိန်လာတာ ၊ အဲ့မှာတင် နင်က စိတ်ကုန် ၊ ဝက်မနဲ့ ညား ၊ ငါကစိတ်နာ အရမ် းလှလာ ..... အဲ့မှာတင် ဘန်နီဖြိုးနဲ့ညား "
" အေး ... ပြီးတာပဲ ၊ အဲ့လိုဆို သဲက ကိုကို့ကို ရစ် ၊ ကိုကိုက အော်မိ ၊ သဲကစိတ်ဆိုး၊ ကိုကို့ကို ဖြတ် ၊ကိုကိုက အသည်းကွဲ ၊ လေလွင့် .... အဲ့မှာတင် လုလုအောင်နဲ့ ညား "
" မသာ ... မယွနဲ့ ၊ ပါးတွေချည်း ချမာ ... "
" ငင့် ... ကိုကိုက စတာလေ !! "
" စတာ .. အတိုင်းအတာတခုထိ စပါလား ... တရား လွန်မလာနဲ့ .. ဒါပဲ နင်နဲ့ငါနဲ့ ၂ ရက်ပြတ်ပြီ "
" ငင့် !!! " (သူပြတ်တာကလည်း တရုတ်ကားလို အပိုင်းနဲ့)
ကိုလည်း သေရင်သေမှ ဒင်းလည်း မြန်မာကားတွေ ကြည့်တာရပ်မှ
သူပြောတော့ အကောင်း ကိုပြောတော့ လူယုတ်မာကို ဖြစ်လို့
ကို့မှာ မျက်ရည်လေးတွေ လည်ပြီး နှပ်တွေထွက် !!
ဒင်းကတော့ စိတ်ကူးနဲ့ မင်းသားတွေ တယောက်ပြီး တယောက်နဲ့ ညားပြီး ကျေနပ်
မရီနဲ့ !!! ဒါရီစရာ မဟုတ်ဘူး !!